हाइड्रोपावर कम्पनीसँग पचास करोडको शेयर
कोशी अनलाइन सोमबार, २९ माघ, २०७४ मा प्रकाशित
माघ २९, इलाम, जिल्लामा सन्चालित पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर कम्पनीले रु.५० करोड मूल्य बराबरको शेयर संकलन गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि आह्वान गरेको शेयरका लागि इलाम नगरपालिका र सन्दकपुर गाउँपालिकाका बासिन्दाबाट मात्र सो रकम संकलन गरिएको हो ।
गत माघ ५ गतेदेखि २३ गतेसम्म शेयर आह्वान गरेको उक्त हाइड्रोमा लक्ष्यभन्दा बढी शेयर रकम संकलन भएको उक्त आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सन्तोषकुमार प्रधानले जानकारी दिए । आयोजनाले ११ लाख कित्ता अर्थात् रु. ११ करोड शेयर निष्कासन गरेको थियो । आयोजनाले अति प्रभावित र प्रभावितका लागि छुट्टाछुट्टै गरेर ११ लाख कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको थियो । अति प्रभावित सन्दकपुर गाउँपालिकाका लागि ६ लाख ६० हजार कित्ता (६० प्रतिशत) अर्थात् रु. ६ करोड ६० लाख तथा प्रभावित इलाम नगरपालिकामा चार लाख ४० हजार कित्ता (४० प्रतिशत) अर्थात् रु चार करोड ४० लाख शेयर निष्कासन गरेको थियो ।
सन्दकपुर गाउँपालिकामा चाहिएभन्दा बढी शेयर रकम संकलन भएको छ । सो गाउँपालिकामा छ लाख ६० हजार कित्ता शेयर निष्कासन गरेकोमा रु १७ करोड शेयर रकम संकलन भएको आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक प्रधानले बताए । यस्तै, इलाम नगरपालिकामा चार लाख ४० हजार कित्ता शेयर निष्कासन गरेकोमा रु. ३३ करोड शेयर रकम संकलन भएको छ । आयोजनाले जिल्लाका तीनवटा बैंक सनराईज, प्रभु र लक्ष्मीसहित सन्दकपुर गाउँपालिकाको कार्यालय र माबु हाइड्रोको कार्यालयबाट शेयर रकम संकलन गरेको थियो । शेयरमा न्यूनतम २० कित्तादेखि अधिकतम पाँच हजार पाँच सय कित्तासम्मका लागि आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
कम्पनीले सन्दकपुर गाउँपालिकास्थित माबु, माईमझुवा र सुलुबुङमा अप्पर माई जलविध्युत आयोजनाबाट १२ मेगावाट क्षमताको अपरमाई आयोजना सन्चालनमा ल्याएको छ भने ६ दशमलव १ मेगावाटको क्यास्केड आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ । १२ मेगावाटको माथिल्लो माई र ६ दशालव १ मेगावाटको माथिल्लो माई ‘सी’ जलविध्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीका लागि १० प्रतिशत शेयर निष्कासन गरिएको प्रधानले जानकारी दिए। उक्त आयोजना सन्दकपुर गाउँपालिकाको माबु र सुलुबुङबीचमा रहेको माइखोलामा सन्चालन भइरहेको छ ।